Mobile House: Android Phone ကနေ Passwords တွေခိုးရတာလွယ်လွယ်လေးပါ။ဒါဆိုရင် သင်ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
Android Phone ကနေ Passwords တွေခိုးရတာလွယ်လွယ်လေးပါ။ဒါဆိုရင် သင်ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
Android Phone ကနေ Passwords တွေကို ခိုးပေးနိုင်တဲ့ dSploit ဆိုတဲ့ Android App အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။Hacker တစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့Wifi Network တစ်ခုထဲမှာ ရှိတဲ့ Devices တွေ က Passwords တွေကိုခိုးယူပေးနိုင်ပါတယ်။dSploit ကိုသုံးဖို့သင့် ဖုန်း ဟာ Root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ဒီနေ့ဝက်ဆိုက်တော်တော်များများ က HTTP အစား HTTPS ကိုသုံးကြပါတယ်။HTTPS ကိုသုံးခြင်းဖြင့် လုံခြုံမှုရှိစေပါတယ်။HTTP အသုံးပြုတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေကို အသုံးပြုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က dSploit app ကိုသုံးပြီးသင့် Passwords တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်။dSploit က Hack လုပ်ဖို့အထူးသီးသန့် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သူ့ အလုပ်လုပ်ပုံကိုသင်သိရင် သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
dSploit ကို ဖွင့်ပြီးရင် Wifi Network ထဲက Device တွေကို Scan လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Device တစ်ခုကိုရွေးပြီး MITM(Man In The Middle ) ကိုရွေးပြီး Password Sniffer ကိုအသုံးပြုပြီး Passwords တွေခိုးနိုင်ပါတယ်။သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Device က HTTP အသုံးပြုတဲ့ဝက်ဆိုက်မျိုးအသုံးပြုတယ်ဆိုရင် Password တွေရနိုင်ပါတယ်။
Session Sniffer ကိုသုံးပြီး Login ၀င်နေတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကလည်း HTTP သုံးတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေ မှရမှာပါ။
အောက်ကပုံကတော့ Amazon အကောင့်ကို dSploit က Hijack လုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
စနောက်ဖို့ အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Tools တွေ လည်းပါရှိပြီး Replace Images,Replace Videos,Kill Connection စတာတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
dSploit ကိုသုံးပြီး Password တွေ ခိုးရတာလွယ်ကူတယ်ဆိုတာ သင်သဘောပေါက်ရင် မိမိရဲ့Password တွေ အခိုးမခံရအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ Public Wifi တွေ အသုံးပြုရင် Bank Account လို အရေးကြီးတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။HTTP အစား HTTPS ကိုသုံးပါ။ Firefox နဲ့ Chrome အတွက် HTTPS Everywhere Extension ကိုသုံးပါ။dSploit လို App တွေကို Detect လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ BlackSheep ဆိုတဲ့ Firefox Add-On ကိုသုံးပါ။ VPN App တွေ သုံးခြင်းကလည်း လုံခြုံမှုရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Ye Yint Aung at 8:12 AM